Vaovao - Fantaro tsara ny fanampiana ara-tsakafo marobe
Mahafantatra am-pahamendrehana fametahana sakafo
Mpibaiko asidra: mamy sy marikivy aho
Mba hahazoana sakafo misy loko, tsiro ary tsiro tsara dia ilaina tokoa ny fanalefahana sakafo. Ny mpandrindra asidra dia karazana mpanaingo manitra, antsoina koa hoe mpandraharaha marikivy. Ny fanampiana solika marikivy amin'ny sakafo dia afaka manome aingam-panahy mamelombelona ny olona, ​​mampitombo ny fahazotoan-komana ary misy vokany antiseptika sasany.
Amin'ny ankapobeny dia mizara ho asidra tsy misy fotony sy asidra organika izy io. Ny asidra anorganika tsy ampiasaina amin'ny sakafo dia asidra phosorika, ary ny asidra biolojika be mpampiasa dia:asidra sitrika, asidra laktika, asidra acétika, asidra tartarika, asidra malika, asidra fumaric, asidra ascorbic, asidra gluconic, sns.
Ny asidra phosoratika dia afaka manolo ny asidra citrika sy ny asidra malika ao amin'ny indostrian'ny zava-pisotro, indrindra fa ny agnaty marikivy amin'ny zava-pisotro tsy misy voankazo izay tsy mety ny asidra citrika. Izy io dia azo ampiasaina ho mpandrindra ny pH amin'ny indostrian'ny fanaovana labiera, ary ho toy ny vahaolana otrikaina misy masirasira ao amin'ny ozinina misy masirasira mba hampiroboroboana ny fitomboan'ny atin'ny sela. Izy io koa dia azo ampiasaina miaraka amina antioxidants amin'ny tavy biby, ary azo ampiasaina ho mpanazava ny ranon-tsiranoka amin'ny fizotry ny famokarana siramamy.
Ny asidra citric dia misy amin'ny tavy zavamaniry sy biby ary ronono, ary ny voankazo voasary dia manana atiny avo kokoa. Ny asidra citrika kristaly dia sombina mangarahara fotsy na vovoka kristaly fotsy. Ny asidra citrika anhydrous dia kristaly tsy misy loko na vovoka fotsy, tsy misy fofona ary tsy misy tsiro marikivy. Ny asidra citrika no mpandraharaha marikivy marobe sy be mpampiasa indrindra. Izy io dia manana solubility avo sy fahaizan'ny chelating matanjaka amin'ny ion-by. Ankoatry ny fampiasana azy ho mpamatsy marikivy amin'ny sakafo, ny asidra citrika koa dia ampiasaina ho toy ny preservative, synergist antioxidant, mpanitsy pH, sns. Ny fatra avo indrindra dia mifanaraka amin'ny filan'ny famokarana mahazatra, ary ny ADI dia tsy misy fetrany.
Ny asidra lakaktika dia hita tao amin'ny yaourt tamin'ny voalohany, ka io no anarany. Asidra lakika sakafo (atiny 50%) dia azo ampiasaina ho toy ny masira mangidy amin'ny zava-pisotro malefaka, zava-pisotro yaourt, divay sentetika, vinaingitra sentetika, saosy voanjo, pickles, sns. ny zava-manitra, fa misy vokany koa amin'ny fisorohana ny fitomboan'ny bakteria.
Ny asidra malika dia ao anaty paoma, ka izany no anarany. Manana tsiro marikivy malefaka sy maharitra izy io. Raha teôria dia afaka manolo tanteraka ny asidra citrika ampiasaina amin'ny sakafo sy zava-pisotro izy io. Eo ambanin'ny fepetra ahazoana io vokatra io ihany, ny fatra antonony dia 8% -12% ambany noho ny asidra citrika (ampahany betsaka). Manokana indrindra, ny asidra malika dia ampiasaina amin'ny sakafo misy tsiro ny voankazo, zava-pisotro misy gazy, sns, izay afaka manatsara ny tsirony voankazo. Any Etazonia dia ampiasaina hatrany amin'ny sakafo vaovao ny asidra malika. Ny habe betsaka indrindra dia mifanaraka amin'ny filan'ny famokarana mahazatra, ary ny ADI dia tsy mila fehezan-dalàna manokana.
Mpitsimbina: Avelao ireo fizaran-taona efatra ho azo antoka sy horaisin'ny mpandray anjara aloha
Ny preservatives, araka ny anarany, dia additives sakafo ampiasaina hitazomana ny sakafo mora simba toy ny legioma, voankazo ary hena vaovao. Noho ny fitehirizana azy, ny saosisy ham, saosisy, hena nahandro am-bifotsy ary sakafo hafa amidy am-pivarotana lehibe dia afaka mitazona ny tsirony mandritra ny fotoana maharitra; noho ny preservative dia afaka mihinana lavitra lavitra fitaterana amin'ny toerana hafa mandavantaona isika. Legioma sy voankazo vaovao.
Ny preservatives mahazatra ampiasaina amin'ny sakafo dia misy asidra benzoic, butylhydroxyanisole ary dibutylhydroxytoluene. Anisan'izany, butyl hydroxyanisole dia preservative tsara, ary tsy misy poizina ao anatin'ny fatran'ny fetra mahazatra. Ny fatra avo indrindra amin'ny sakafo dia tsy tokony hihoatra ny 0.2 g / kg raha matavy. Rehefa 0,02% ny fatra azy dia mihoatra ny 0,01%. Ny vokatry ny antioxidant dia nitombo 10%. Amin'ny maha-anti-otrikaina mety levona azy, ny hydroxyanisole butylated dia mety amin'ny sakafo misy menaka sy sakafo be tavy. Noho ny fahamarinan-toetrany tsara dia azo ampiasaina amin'ny fepetra fanendasana na fanaova izy io.
Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny fikarohana momba ny preservatives voajanahary dia nahasarika ny sain'ny be mpahay siansa manerana an'izao tontolo izao, ary vokatra marobe voaaro voajanahary no ankasitrahan'ny olona toy ny polyphenols dite, vitamina E voajanahary, polylysine ary chitosan.
Mikasika ireo voankazo novidintsika tamin'ny fiainantsika isan'andro dia nanoro hevitra ny manam-pahaizana fa raha mbola mampiasa preservatives tsara ny orinasa dia tsy tokony hatahotra ny mpanjifa amin'ny olana ara-piarovana.
Preservatives: manitatra ny androm-piainan'ny sakafo
Ny preservatives ara-tsakafo dia afaka manakana ny asan'ny mikraoba, misoroka ny sakafo tsy simbaina sy manimba, ka manitatra ny fivelaran'ny sakafo. Ny ankamaroan'ny zava-pisotro sy sakafo fonosana dia tehirizina mandritra ny fotoana maharitra, ary matetika ampiana ny preservatives sakafo. Satria mifandraika amin'ny fahasalaman'ny olona izany, ny fitehirizana ny sakafo no ferana indrindra amin'ireo karazana preservatives.
ny fireneko dia tsy nankatò afa-tsy mihoatra ny 30 ny preservatives ara-tsakafo avela, izay samy poizina ambany sy azo antoka kokoa. Alohan'ny hanekena azy ireo hampiasaina dia nandalo andrana maro be ara-tsiansa izy ireo, anisan'izany ny fitsinjovana ny biby, ny fanapoizinana ary ny fanapoizinana ary nanamarina azy ireo, ary voamarina fa tsy hiteraka fahavoazana mahery vaika na ambany na ratsy amin'ny vatan'olombelona izy ireo.
Matetika ampiasaina dia asidra benzoika, sodium benzoate, asidra sorbika, sorbate potasioma, propionat calcium, sns. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny preservatives amin'ny sakafo dia nanomboka mivoatra amin'ny làlan'ny fiarovana, ny sakafo ara-tsakafo ary ny tsy fandotoana. Nipoitra ny preservatives vaovao toy ny glucose, oxidase, protamine, lysozyme, bakteria asidra lacté, chitosan, vokatra famotehana pectin sns. Ary eken'ny fanjakana ampiasaina.
Raha ny tena izy, raha mbola voafehy fatratra ao anatin'ny sehatra voafaritra ao amin'ny fenitra nasionaly "Fitsipi-pidiovana ho an'ny fampiasana fanampiana ara-tsakafo" ny fahasamihafana, ny habetsahana ary ny habetsaky ny fitehirizana sakafo ampiasain'ny mpanamboatra sakafo, dia tsy hisy fahavoazana ho an'ny fahasalaman'ny olombelona, ary afaka matoky ny olona fa azo hanina.
Ohatra, ny sakafo hita eny an-tsena matetika dia misy preservatives toy ny potassium sorbate sy sodium benzoate. Ireto preservatives roa be mpampiasa indrindra ireto dia mazàna mivoaka amin'ny mony fa tsy ao amin'ny vatana aorian'ny fihinan'ny vatan'olombelona. Manangona.
Raha tsy misy additives sakafo
Raha tsy misy antioxidant-
Ny sakafo menaka, na menaka voajanahary sy legioma na sakafo nendasina, dia hiteraka tsy fahampian-tsakafo noho ny fitrandrahana ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy afaka manendasa sy mivarotra azy ireo fotsiny ny mpamokatra. Ireo mpaninjara dia mila manavao ny talantalana isan'andro. Vao mainka aza tsy mahazo antoka intsony ny mpanjifa. Ho lasa tsy afaka atao koa ny fitaterana sakafo lavitra.
Raha tsy misy fiomanana anzima-
Ny mofo mangotraka izay nohanin'ny Sinoa dia tsy ho malefaka sy matsiro toy ny ankehitriny. Ny eoropeanina dia tsy mahazo mihinana mofo mafy toy ny tamin'ny Moyen Age. Ny asidra vavony sy ny rora ihany no azon'ny olona ety an-tany ianteherana.
Raha tsy misy humectant-
Saosisy, saosisy ary hena nahandro am-bifotsy no handao ny latabatray, satria ny fahaverezan'ny ranom-boankazo nandritra ny fanodinana azy dia mahatonga azy ho tsiron-tsako! ny trondro, ny patsa ary ny hazan-dranomasina hafa dia tsy afaka manome fahafaham-po ny filan'ny olona any anaty any, satria ho very ny proteinina amin'ny fizotry ny fitahirizana mangatsiaka. Ny fiankinan-doha sy ny hatsiaka ary ny fahaverezan'ny fanalefahana dia avo; ny tena mampalahelo dia very rehydration isika ary tsy mahazo mihinana paty eo no ho eo akory.
Raha tsy misy stabilizer sakafo-
Amin'ny fahavaratra mafana, ny gilasy malalantsika malala dia feno sisan-dranomandry ao anaty vata fampangatsiahana. Mampalahelo ny mihinana toy ny gilasy; mampalahelo ny manary; ronono kakaô, ronono ranom-boankazo, yaourt sterilise, yaourt maro karazana, ronono mavitrika sns ... Tsy azo sotroina izy io, na dia voahosihosy foana aza ny ronono eny an-tanety.
Raha tsy misy emulsifier——
Ny fisehoan'ny ronono sy ny rano hafahafa dia miseho amin'ny zava-pisotro. Ny siramamy amin'ny vokatra sôkôla dia mora voaravaka, tsy mora tehirizina ny mofo, misaraka amin'ny menaka sy rano ny margarine sy ny sakafo am-bifotsy, ary mora esorina sy miraikitra amin'ny nify ny tavo sy ny siligaoma.
Raha tsy misy masirasira masirasira-
Ireo rantsankazo voatabia ankafizin'ny avaratra dia hisalasala hanome, ary ny mofomamy izay tian'ireo avy any atsimo. Ny vahoaka manerana ny firenena dia tsy maintsy manao veloma an'ireo tapa-mofo nendasina izay nohanina nandritra ny 900 taona mahery.
Raha fintinina, raha tsy misy additives sakafo, dia tsy hisy indostrialy sakafo maoderina mandroso be, ary tsy hisy fiainana maoderina avo lenta.
Loharano: Article by Food Original
Fotoana fandefasana: Jul-16-2021